မြင်းမိုရ်ဦး: Golf debut
ဒီတပတ်တော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဂေါက်ကွင်းမှာဂေါက်သီးသွားရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်သူငယ်ချင်းက သူ့ရဲ့သုတေသနတွေမှာအစကအဆုံးကူညီသင်ပြပေးတဲ့ကျွန်တော့်ကို ခင်လည်းခင်၊ ကျေးဇူးလည်းတုန့်ပြန်ချင်တာနဲ့၊ ဂေါက်သီးကစားဖို့တိုက်တွန်းပြီး၊ ဂေါက်တံ၊ဂေါက်အိတ်ကအစ၊ လက်အိတ်၊ဖိနပ်အဆုံးဝယ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အားကစားဝါသနာပါပေမယ့် ဂေါက်သီးအားကစားကိုတော့ ငွေကုန်ကျများလွန်းလို့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းက မြန်မာပြည်ပြန်ရင်ဂေါက်သီးရိုက်ဖြစ်အောင်ရိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းပြီး ဂျပန်ရောက်တုန်းအမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်၊ မပြန်ခင်တတ်ရိုက်တတ်သွားအောင်ဆိုပြီး လေ့ကျင့်ကွင်းကိုလိုက်ပို့ပေး၊ သင်ပေးပါတယ်။ သေချာတော့မရိုက်တတ်သေးပေမယ့်၊ ပြန်ခါနီးနေပြီမို့ တစ်ခေါက်လောက်ကွင်းမှာသွားရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီး၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ၊ ဖူဂျီတောင်နားက ကွင်းမှာသွားရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။
မနက်အစောကြီးထရမှာမို့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာသွားအိပ်ရပါတယ်။ မိသားစုနဲ့တညဘဲခွဲအိပ်ရပေမယ့်၊ လွမ်းနေမိပါတယ်။ မနက်ကျတော့၅နာရီအိပ်ယာထပြီး တိုကျိုကနေကားနဲ့မနက် ၅နာရီ၂၀မှာစထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယိုကိုဟားမားမှာ သူငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုဝင်ခေါ်ပြီး ဖူဂျီဖက်ဆက်ထွက်ခဲ့ကြတာ၊ ကီလို ၁၂၀ဝေးတဲ့ဂေါက်ကွင်းကိုမနက် ၈း၄၅မှာရောက်ကြပါတယ်။
တနေ့လုံးတိမ်တွေဖုံးနေလို့ဖူဂျီတောင်ရဲ့နှင်းဖုံးနေတဲ့အပိုင်းကိုမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ တောင်ခြေနားနီးနဲ့နီးတဲ့အတွက် အပူချိန် ၁ဒီဂရီထိအေးပါတယ်။ ပထမဆုံးကွင်းအတွေ့အကြုံမို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားဆိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားတ၀က်၊ ပျော်ရွှင်တာတ၀က်နဲ့ပထမကျင်းစခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလိုကယ်ရီငှားစရာမလိုဘဲ တစ်ကျင်းစီအစဉ်လိုက်အလိုအလျောက်မောင်းပို့ပေးတဲ့ဘက်ထရီသုံးအော်တိုကားလေးနဲ့ဂေါက်အိတ်တွေတင်ပြီး၊ ဝေးတဲ့ကျင်းဆိုရင်ကားလေးနဲ့လိုက်ပြီးနေရာရွှေ့ကြတာမို့ မပင်မပန်းပါဘဲ။
သိပ်အေးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သွေးပူအောင်ကားလေးကိုသူ့ဖာသာသွားခိုင်းပြီး ကျင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုရိုက်လိုက်၊လမ်းလျှောက်ပြီး ဂေါက်သီးနောက်လိုက်လိုက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လိုက်၊ ဂေါက်ရိုက်လိုက်ဆိုတော့ နှေးနေကြလို့ ဂေါက်ကွင်းဝန်ထမ်းက နောက်ကလိုက်လာပြီး နောက်အဖွဲ့စောင့်နေပြီမို့၊ မြန်မြန်ရိုက်ပေးဖို့ ပြောလည်းပြော၊ အချိန်ကုန်လည်းသက်သာအောင်၊ ကျွန်တော်တို့ရိုက်သမျှဂေါက်သီးတွေဘယ်နေရာမှာကျတယ်၊ ဂရင်းရောက်ဖို့ဘယ်နှစ်ကိုက်လိုသေးတယ် ဘယ်ဂေါက်တံနဲ့ဆိုအဆင်ပြေမယ်စသည်ဖြင့်လိုက်ပြောပေးနေခဲ့လို့ ကြိတ်ရယ်ကြရပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံး၃ကျင်းကို အပြေးအလွှားအမြန်ရိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ နေ့လည်စာချိန်မှာ ကိုးကျင်းပြည့်ပြီး နားတဲ့နေရာစားသောက်ဆိုင်မှာနေ့လည်စာစားကြပါတယ်။
၁နာရီခွဲကနေဒုတိယကိုးကျင်းပြန်စပတ်ကြပါတယ်။ ရာသီဥတုလေးကောင်းလာပြီးနေလည်းပွင့်လာပါတယ်။ ၄နာရီခွဲမှာ ၁၈ကျင်းပြည့်သွားပါတယ်။ ချုပ်လိုက်တော့၊ သစ်ပင်အုပ်ထဲဂေါက်သီးနှစ်လုံး၊ ရေကန်ထဲတစ်လုံးပျောက်ပြီး၊ ရိုက်ချက်စုစုပေါင်း (၁၅၀)နဲ့၎ယောက်မှာစတုထ္ထရခဲ့ပါတယ်။
ဂေါက်ကွင်းကအပြန်ညစာကို လမ်းကဟန်ဘာဂါဆိုင်မှာဝင်စားကြရင်း၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ အသစ်ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတူဂေါက်ရိုက်ဖော်သူငယ်ချင်းတို့က၊ ဂေါက်ရိုက်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးမှာ၊ Debut Omedetou ဆိုပြီးအမှတ်တရရေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပျော်စရာဂျပန်အမှတ်တရလေးတစ်ခုဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။
Posted by Dr. Nyan at 8:07 PM
Nice to read. U can monitor your time with family, exercise, study, blog........ I envy you.